झरना नहर्की - नारी
झरना नहर्कीका लेखहरु
समयसँगै फेसन पनि परिवर्तन हुँदैछ । खरिददारी मात्र गरेर हुँदैन त्यसलाई कसरी स्मार्ट तरिकाले लिइएको छ त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ । कम बजेटमा ट्रेन्डी तथा स्टाइलिस आउटफिट खरिद गर्न सक्नु नै बुद्धिमत्ता हो ।
झरना नहर्की, श्रावण ७, २०७३
संगीता निक्कै व्यस्त भए पनि आफूलाई चिटिक्क सजाएर हिँड्न रुचाउँछिन् । १६ वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय सिलवाल महिलाहरूको जीवन परिवर्तन गर्न शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँछिन् ।
झरना नहर्की, श्रावण ३, २०७३
महिलाहरूको धन प्रबन्ध
हिजोआज महिलाहरू हर क्षेत्र तथा प्रभावशाली पदमा छन् । हरेक दिन त्यस्ता महिलाहरूको संख्या वृद्धि हुँदैछ जसको साथमा आफ्नो पैसा छ । उनीहरूलाई वित्तीय संसारको महत्वपूर्ण अंग पनि मानिएको छ ।
झरना नहर्की, असार ८, २०७३
राष्ट्र हितका लागि के गर्न सक्छु ?
देशका लागि हामी सबै नेपालीले आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान दिएका छौं । कसैको योगदान देखिन्छ भने कसैको देखिँदैन । हामी सौन्दर्यकर्मीहरूले पनि देशका लागि केही योगदान दिएका छौं ।
झरना नहर्की, वैशाख १७, २०७३
गर्मीको रापिलो दिनमा फ्रिजको चिसो पानीले आँतलाई शीतल बनाउँछ। गर्मीमा यसको महत्व बढी नै हुन्छ। गर्मीमा मात्र होइन अहिले हरेक महिना यसको उपादेयता छ।
झरना नहर्की, कार्तिक १६, २०७२
फिल्डमा काम गर्ने महिलाहरूलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै कुन समयमा के खाने भन्ने हो । उनीहरूको जीवनचर्या अनिश्चित हुन्छ । त्यसैले बिहानको चिया, खाना तथा खाजा खाने निश्चित समय हुँदैन ।
झरना नहर्की, कार्तिक १३, २०७२
श्रीमानको कमाइ कति छ ?
महिलाको उमेर र पुरुषको आय नसोध्नु भन्ने उक्ति हाम्रो समाजमा निकै प्रचलित छ । अधिकांश श्रीमती श्रीमानको आयप्रति बेवास्ता गर्छन् । यसलाई स्वीकार गर्छन् र थाहा नभएजस्तो देखाउँछन् ।